မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင် . . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင် . . .
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင် . . .
Posted by မမေလး on May 25, 2011 in Myanma News, News | 14 comments
ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမဲလိုက္ခြင့္ လိုင္စင္ . . .
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြား သစ်တောနယ်မြေများရှိ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များအား ဖမ်းဆီးမည်ဆိုပါ က
သစ်တောဦးစီးဌာနတွင်အမဲ လိုက်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားသူသည် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင်ခကို ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောနယ် မြေ ၃၆ ခုကို သဘာဝ သစ်တောနယ်မြေများ အဖြစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားပြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို အပြည့်အဝ(လုံးဝ) အကာအကွယ် ပေးခြင်း၊ သာမန်ကာကွယ်ပေးခြင်း နှင့် ရာသီအလိုက် အကာအကွယ်ပေး ခြင်းဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ ကာကွယ်ထားကြောင်းနှင့် လက်ရှိအချိန်တွင် နို့တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစိတ် ၅၃ မျိုး၊ ငှက်မျိုးစိတ် ၁၀၆ မျိုး၊ ကုန်းနေ၊ ရေနေနှင့် တွားသွား သတ္တဝါမျိုးစိတ် ၁၅ မျိုးတို့အား အကာအကွယ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိထားသူအနေဖြင့် အဆိုပါ အကာအကွယ်ပေးထားသော သဘာဝသစ် တောနယ်မြေများနှင့် နယ်မြေအတွင်းရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား လည်းကောင်း၊ အကာအကွယ်ပေး ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား လည်းကောင်း ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း သိရသည်။
“ အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိထားတဲ့သူ အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သဘာဝနယ်မြေ မဟုတ်တဲ့ သစ်တော အတွင်းမှာပဲ အမဲလိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ အတွင်းမှာရှိတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေ၊ နောက် အကာအကွယ်ပေးစာရင်းထဲမှာပါတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ဖမ်းဆီးခွင့်မရှိပါဘူး။ ဖမ်းဆီးခဲ့မယ် ဆိုရင် ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သစ်တောဦးစီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင် မရှိဘဲ အခြားတောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များကို အမဲလိုက်ခြင်း၊ တရားမဝင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ တွေ့ရှိပါက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီရွာထဲမှာ အမဲလိုက်ရင် ခေါင်းမွှေး နှစ်ချောင်းထောင်နေတဲ့ ငှက်အပြာလေးကို မှားမပစ်မိစေနဲ့.. ရွာပြင်ရောက်မှ ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ။
ဘယ်သူလဲဗျ။ မြှားနဲ့ လိုက်ပစ်ဖို့ လိုက်ချိန်နေတာ။
လေးနဲ့ မြှား ကြီးကိုင်ပြီး ပိတ်စ အတိုလေးပတ်ပြီး မြိန့်မြိန့်ကြီး ထိုင်နေတာ.. ဘယ်သူတုန်း။
ပြော တာမရှင်းလို့ မဆူးရေ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ခေါင်းမွှေး နှစ်ချောင်းထောင်နေတဲ့ ငှက်အပြာလေး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့ မေးတာ ကျွန်တော်က မြှားနဲ့ လိုက်ပစ်မလို့ လိုက်ချိန်နေတာ
အဝေးကြီး ရှာစရာ မလိုဘူး.. ရွာထဲမှာ ရှိတယ် ခေါင်းမွှေး ၂ချောင်း ထောင်နေတဲ့ ငှက်အပြာလေး ရှိကို ရှိတယ်။ အဲဒီ ငှက်မျိုးက အရှင်ဖမ်းပြီး ရုံသွင်းပြစားလို့လည်း ရတယ်။ အမွှေးနုတ်ပြီး ရောင်းစားလို့လည်း ရတယ်။ အသားကိုလည်း ချက်စားရင် ကြက်ဆင်သားနဲ့ မှားနိုင်တယ်။ ပိုစ်တွေမှာ ရှာလိုက်တာနဲ့ တွေ့လိမ့်မယ်။ ရွာထဲမှာ မပြောဘူး ရွာပြင်ရောက်မှ ပြောမယ်။
ဟဲဟဲ အဲဒီ ငှက်ကိုတွေ့ပြီ။
ထင်တော့ ထင်သားပဲ.. အီးရိုး အယ်… အယ်ရောစ် အဲလောက် မတုံးပါဘူးလို့.. အဟိ..
ပစ်မဖမ်းပါဦး ဆူးရဲ့… ပိုက်ကွန်နဲ့ အရှင် ဖမ်းပြီ ….
ကူးလာတဲ့ web site link (credit) လေးပေးပါဗျ။
သေနတ်ကိုင်လိုင်စင် (သို ့မဟုတ်) သေနတ်ပစ်ခွင့် လိုင်စင် အကြောင်းလေး လည်း ရေးပေးပါဦး မမလေး ရေ
မူရင်းရေးသားချက်မှာ သေနတ်ကိုင်လိုင်စင် (သို ့မဟုတ်) သေနတ်ပစ်ခွင့် လိုင်စင် အကြောင်း မရေးထားဘူးလေကွ …